တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ကရင်အမျိုးသားတို.၏တော်လှန်ရေးသက်တမ်းနှစ်(၆၀)ပြည့်ပြီ၊	January 22, 2009
ဒို.တတွေ တရားမျှတမှုရှိသောစစ်ပွဲကိုတိုက်နေကြတာ၊ဒါဟာမတရားတဲ့စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ဖို.အခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည်ှုIt is better to die on our feet then to live on our knees ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ့်ရပ်တည်ပြီး သေဆုံးတာဟာ ဒူထောက်ပြီးအသက်ရှင်နေရခြင်းထက်ကောင်း၏၊ကျွန်ဘဝဖြင့်အသက်ရှင်နေခြင်းထက်သခင်ဘဝဖြင့်သေ ဆုံးခြင်းသည်ပိုကောင်း၏၊လူသတ်သမားကိုဘုရားအလောင်ဟုဂုဏ်ပြုသောမဟာဝါဒီသမားမှန်သမျှတိုက်ဖျက်ကြ၊ကရင်တော်လှန်ရေးအဓွန်.ရှည်ပါစေ၊ကရင်တော်လှန်ရေး၊အောင်မြင်ပါစေ၊
Address of KNU President Tamlabaw on 60th Anniversary of Karen Revolution Dear Karen nationals and KNLA officers and men,
In conclusion, I would like to say that the military regime in power, to divide us, will try to sow dissension among the Karen people and the KNU by various deceitful means, in this year as well. For that reason, I would like to urge all to be vigilant, to oppose the entire enemy’s attempt to divide us, to fight for freedom from repressive rule of the chauvinists in power and to struggle, on all sides, together with fellow oppressed nationalities and democratic forces, until the system of military dictatorship is terminated. The Just Karen Revolution Shall Triumph Definitely!